श्रमका लागि प्रमुख गन्तव्य मलेसिया र खाडीका देशबाट विद्युतीय राहदानी जारी ! • raradiodarpan.com
श्रमका लागि प्रमुख गन्तव्य मलेसिया र खाडीका देशबाट विद्युतीय राहदानी जारी !
नेपालीको श्रम गन्तव्य देश खाडी र मलेसियाबाट विद्युतीय राहदानीको लाइभ इनरोलमेन्ट सुरु भएको छ । खाडीका देश कतार, साउदी, कुवेत, यूएई र मलेसियामा र
हेको नेपाली दूतावासले विद्युतीय राहदानीको लाइभ इनरोलमेन्ट सुरु गरेका हुन । खाडीका देश साउदी र कुवेतमा रहेको नपाली दूतावासले आज आइतबारदेखि लाइभ इनरोलमेन्ट सुरु गरेका छन् ।
भने यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले सोमबारदेखि विद्युतीय राहदानीको लागि लाइभ इनरोलमेन्ट सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगमा सबैभन्दा पहिले कतारमा रहेको नेपाली दूतावासले विद्युतीय राहदानीको लाइभ इनरोलमेन्ट सुरु गरेको हो ।
शुक्रबारसम्म मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले ६ सय भन्दा धेरैको राहदानी नवीकरणका लागि लाइभ इनरोलमेन्ट गरिसकेको जनाएको छ । सुरुवाती चरणमा दूतावासहरूले निश्चित सङ्ख्यामा मात्र विद्युतीय राहदानीको लागि लाइभ इनरोलमेन्ट गरिरहेका छन् ।
दूतावासहरूले भर्खरै विद्युतीय राहदानी सम्बन्धी सिस्टम जडान गरेकाले सुरुवाती दिनमा केही समस्याहरू आउन सक्ने छ ।
स्लो हुने वा अन्य प्राविधिक स’मस्या पनि देखा पर्दा प्री इनरोलमेन्टमा समस्या भएको सेवा-ग्राहीको गुनासो छ ।
तर दूतावासमा जडित सिस्टम काठमाण्डौको सिस्टमसँग बेलाबेला बिच्छेद हुने समस्या भइरहेकाले पहिलो चरणमा यो समस्यालाई बुझिदिनेसमेत अनुरोध दूतावासले गरेका छन् । सिस्टममा समस्या भएमा दूतावासमा पुगेका सेवाग्रा-ही पनि फर्कन पर्ने हुनसक्छ ।
अबको एक दुई हप्ता यस्तो समस्या आउन सक्ने भन्दै अति आवश्यक परेकाले बाहेक तत्काललाई राहदानी नवीकरणको लागि निवेदन नदिन समेत साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।
धेरै जनाले एकै पटक प्री इन-रोलमेन्ट गर्ने प्रयास गर्दा कहिलेकाहीँ समस्या आउनेभन्दै धैर्य गरेर आवेदन दिन भनिएको छ ।प्री इनरोलमेन्ट गरेर तोकिएको समयमा दूतावासमा उपस्थित भएका सेवा-ग्राहीको मात्र दूतावासले बायोमे-ट्रिक विवरणसहितको प्रक्रिया अघि बढाउने छ । राहदानी नवीकरणका लागि दूतावासमा आफैँ उपस्थित हुन पर्ने छ ।
विद्युतीय राहदानीको लागि आवेदन दिन प्री इनरोलमेन्ट गर्ने तरिका !
सबैभन्दा पहिला https://emrtds.nepalpassport.gov.np लिंकमा जानुहोस् । पहिलो पटक राहदानी बनाउने (नेपाली बाबु आमाका कतारमा जन्मेका सन्तानको हकमा) वा हस्तलिखित राहदानीवाहकहरूले नयाँ (New) मा क्लिक गर्ने ।
पुरानो एमआरपी हुनेहरूले नवीकरण (Renewal) मा क्लिक गर्ने । राहदानी हराएको हकमा हराएको/चोरिएको (Lost/Stolen) तथा राहदानी विभिन्न कारणले बिग्रेको हकमा बिग्रेको (Damaged) र त्यसपछि Ordinary 34 pages अप्सनमा क्लिक गर्ने ।
त्यस पश्चात् उपलब्ध हुने राहदानीको फाराममा भएका विभिन्न चार उपशीर्षकमा रहेका विवरणहरू भर्ने । विदेशबाट आवेदन गर्नेकाे हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर राख्न नपर्ने ।
आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको दुवै पेज, अहिले भएको राहदानीको फ्रन्ट र ब्याक पेज तथा अन्य सान्दर्भिक कागजात छुट्टाछुट्टै स्क्यान गरी अपलोड गर्ने ।
त्यसपछि Book Your Appointment मा प्रवेश गरेर Other अप्सन क्लिक गरी NE, Doha अप्सन छानेर आफूलाई उपयुक्त हुने वा उपलब्ध मध्ये अघिल्लो मिति र समय बुकिङ गर्ने र फाराम submit गर्ने ।
त्यसपछि प्राप्त हुने बारकोडसहितको फाराम डाउनलोड गरी प्रिन्ट गरेर दूतावासमा आवेदनका लागि जाँदा फाराम पनि लिएर जानुपर्छ । प्री इनरोलमेन्ट गर्दा अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू नागरिकता प्रमाणपत्रको पहिलो र दोस्रो
पेज छुट्टाछुट्टै, अहिलेको राहदानीको फ्रन्ट पेज (फोटो तथा व्यक्तिगत विवरण भएको पेज) र ब्याक पेज (पेज ३० र ३१) छुट्टाछुट्टै र अहिलेको राहदानी हराएको हकमा प्रहरीबाट जारी गरिएको राहदानी हराएको प्रहरी प्रतिवेदन चाहिन्छ ।